म एकदमै असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु, म के गरुँ भन्नुस् त ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/म एकदमै असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु, म के गरुँ भन्नुस् त ?
काठमाडौँ । समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेपालको नयाँ नक्सा र सीमाको कुरा उठाउँदा आफू असुरक्षित भएको बताएकी छिन । एक अन्तरवार्ताको क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन । उनले भनिन,- ‘म एकदमै असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु, म के गरुँ भन्नुस् त ।’
९० बर्षीय आफ्ना बुबा विरामी भएकोले भेटघाटको लागि माईत जानलाग्दा सिरहाको ठाडी नाकामा प्रहरीले रोकेको बताऊदै उनले राज्यले आफूलाई गिरफ्तार गर्न खोजेको आरोप समेत लगाईन ।तर उनी अहिले नयाँ नक्सा र सीमाका विषयमा विवादित भएको हुनाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षाकर्मीले उनलाई सीमा क्षेत्रबाट फर्काएको बुझिएको छ ।
पोखरा, १६ जेठ । बेल्जियमबाट चैत ४ गते नेपाल आएकी बागलुङकी अंशु सापकोटालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि धौलागिरि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी २८ दिन अस्पताल बसेर निको भई १२ वैशाखमा घर फर्किइन्।
अस्पताल बसिरहेको १२ दिनपछि चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अंशुलाई फोन गरी हालचाल सोधे—डक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ तपाईंलाई हेर्न ? अंशुले भनिन्, ‘आउनु भएको छैन।’ मुख्यमन्त्रीले फेरि दोहोर्‍याए, ‘कोठामा आएको छैन ?’ अंशुले उत्तर दिइन्, ‘आउनु भएको छैन। फोनबाट कुरा हुन्छ।’ मुख्यमन्त्रीले नआत्तिकन बस्न, आफूसँग दिनदिनै डक्टरसँग कुराकानी भइरहेको र राम्रो उपचार गर्न भनेको बताए।
धौलागिरी अस्पतालमै अर्की कोरोना संक्रमित मनकुमारी पौडेल भर्ना भई ६ वैशाखमा घर फर्किएकी थिइन्। यिनै दुईजनाको उपचार गर्दाको प्रोत्साहन भत्ता भनी धौलागिरी अस्पतालले डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी पेस गरेको छ।
उक्त अस्पतालले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ माग गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ जेठमा पत्राचार गरेको छ। २ जनाकै उपचारको खर्च भनी त्यतिका धेरै रकम माग गरेको बारे बुधबार गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद विनोद केसीले प्रश्न उठाए।
उनले संसदमा भने, ‘दुईजनालाई निको बनाउन यत्रो खर्च आएको छ, भोलि हजारौं लाखौं संक्रमित हुँदा हामीले व्यवभार धान्न सक्छौं त ?’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
जनकपुरका विभिन्न स्थानमा फालिए सयका नोट, कोरोना फैलाउन खोजेको आशंका
डेढ घण्टामै उल्टियो सरकारको निर्णय, भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान नदिइने
कसरी फैलियो स्याङ्जा प्रहरीमा कोरोना?
नेपाली किशोरीलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ६ युवक पक्राउ
सीमा अतिक्रमण रोक्न भारत सीमामा बढ्यो सशस्त्र प्रहरीको निगरानी